MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 849
> အန်နိုး – ဖက်တွယ်ထားပုံ ကဗျာUnknown – Poem November 13th 2008 No tags for this post. Related posts No related posts.
> (အသံ နားဆင်လိုပါက ဤနေရာ ကို နှိပ်ရန်) ၀င်းဖေလွယ်အိတ် အမှတ် ၇မင်းသားကြီး ဦးထွန်းေ၀၀င်းဖေနိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈ သောတရှင်များခင်ဗျား ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ရုပ်ရှင် သဘာဝမင်းသားကြီး ဦးထွန်းဝေကို ကျနော်က လေးလေးထွန်းဝေ လို့ ခေါ်ပြီး မင်းသားကြီးကတော့ ကျနော့်ကို ဆရာကြီးလို့ခေါ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါကလည်း ကျနော်ဟာ အနုပညာ ပန်တျာနဲ့ အကကျောင်းမှာ ကျောင်းအုပ်လုပ်ခဲ့တာမို့ လေးလေးအနေနဲ့ ကျနော့်ကို ဆရာကြီးလို့ နှုတ်ကျိုးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်မျိုးရိုး အဆက်အစပ် မရှိတဲ့ ကျနော့်ကို ၀ါရင့် ရုပ်ရှင်ပညာရှင်ကြီး ဦးထွန်းဝေက ဆရာကြီးလို့ ခေါ်တဲ့အတွက် ရုပ်ရှင်နယ်အတွင်း ကျနော့် အစောပိုင်းကာလတွေမှာ အတော်ကြီးကို လုံခြုံမှု ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဦးထွန်းဝေဟာ တရုတ်ဗမာကပြား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်...
> အတွေးတစ်စ ဇေမှိုင်း နိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈ နှစ် ၄၀ ကျော် တဝိုက်မှာ ချစ်ခဲ့ ကြိုက်ခဲ့တာများ ပြန်စဉ်းစားရင် လွမ်းသလို ဆွေးသလို၊၊ ငါ … အိမ်ပြန်မယ် စဉ်းစားတော့ အိမ်ပျောက်နေပြီ ငါ့ ရဲဘော်တွေဆီ အလည် ပြန်သွား မလို့ ငါ့ ဝန်းကျင်တခုလုံး မှောင် အနှစ် ၂၀ ချစ်နေဆဲ။ “မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ ချစ်နေသေးသည် ကြွေးကြော် စူးရဲ တိုက်ပွဲထဲက ပြည်သူတွေ” No tags for this post. Related posts No related posts.
> တရားရုံးကို မထီမဲ့မြင်ပြုသည်ဟု စွတ်စွဲခံရသည့် ရှေ့နေဦးအောင်သိန်း၏ ထောင်ဒဏ်မကျခံရမီ ရုံးတော်သို့ လျှောက်ထားချက် လက်ခံရရှိ မိုးမခ နိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တရားရုံးကို မထီမဲ့မြင်ပြုသည်ဟု စွတ်စွဲခံရပြီး မျက်ကွယ်တွင် ထောင်ဒဏ်နှင့် ဖမ်းဆီးထောင်ချခံလိုက်ရသူ ဦးအောင်သိန်း၏ တရားရုံးတော်သို့ နောက်ဆုံး တင်ပြခဲ့သည့် လျှောက်လဲချက်ကို အမည်မဖော်ပြလိုသည့် တရားရေးဝန်ထမ်းတဦး ဆိုသည့် ပေးစာဖြင့် လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ မြန်မာပြည် စစ်အစိုးရလက်အောက်တွင် တရားရေးမဏ္ဍိုင် ကျဆုံးပျက်စီးနေပုံကို လေ့လာသိရှိနိုင်ရန် လျှောက်ထားချက်မိတ္တူကို တင်ပြလိုက်ရပေသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
> နိုင်ငံတကာက ဖိအားပေးနေသည့်ကြားက စစ်အစိုးရက အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူများကို ထောင်ချ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ နိုဝင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၈ အမေရိကန်အစိုးရက မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် ခန့်အပ်ရန် တင်ပြနေချိန်၊ ဥရောပ သမဂ္ဂကလည်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ဒေါ်စုနှင့်တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုနေချိန်တွင် စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးထားသူ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ ကျောင်းသားလူငယ်များကို ထောင်ဒဏ်များ ပြင်းထန်စွာ ချမှတ်လိုက်သည်။ အေအေပီပီ ခေါ် မြန်မာအကျဉ်းသားစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့နှင့် သတင်းဌာနများအဆိုအရ လူပေါင်း ၄၀ ခန့်ကို ထောင်ချလိုက်သည်ဟု ဆိုသည်။ ငွေကြာယံ ကျောင်းတိုက် သံဃာ ၅ ပါး – ထောင် ၆ နှစ်ခွဲ ၈၈ မျုိးဆက် ကျောင်းသား ၁၄...
> From 2008 – 9th Annual Burmese Literary Talk ဘေးဧရိယာ မြန်မာများ စာပေဟောပြောပွဲ ကျင်းပ မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၀၈ စနေနေ့က ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးဧရိယာ မြန်မာစာပေချစ်သူများ ၀ိုင်းဝန်းစီစဉ်ကြသည့် ၉ ကြိမ်မြောက် စာပေဟောပြောပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့သည်။ ဧည့်သည် အနုပညာရှင်ကြီးများဖြစ်သည့် ဒါရိုက်တာဝင်းဖေ၊ မောင်စွမ်းရည်၊ တေးသံရှင်မာမာအေး၊ ကဗျာဆရာ အောင်ဝေးတို့နှင့်အတူ နယ်ခံစာရေးဆရာ ဉာဏ်ဦးမောင်တို့က ကြွရောက်လာသူ ပရိသတ် ၁၀၀ ကျော်ကို ဟောပြောခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဓာတ်ပုံများကို တင်ဆက်လိုက်သည်။ (ဓာတ်ပုံ – မိုးမခ၊ ငယ်ဦးမွန်) Tags: ဆန်ဖရန်...
> ဖေဖော်ဝါရီဆယ့်လေး စောဝေ နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈ အာရင်ဘက်က ပြောတယ်နာနာခံစားတတ်မှ ခံစားမှရူးရူးမူးမူးကို ဖြစ်နေမှကြီးမြတ်တဲ့အနုပညာလို့မှူးမှုံမှိုင်းဝေစေတဲ့ ဓာတ်ပုံမော်ဒယ်မလေးရေကြီးတောင့်ကြီးမားကျမှ အသည်းကွဲတဲ့ရောဂါ တဲ့သန်းပေါင်းများစွာသော ချစ်တတ်သူများရွှေအတိချထားသောလက်များဖြင့် လက်ခုပ်တီး၍ရယ်ပါ။ ။ 1.10.2008 (မူရင်း-အချစ်ဂျာနယ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၀၈) No tags for this post. Related posts No related posts.
> မြန်မာဘလော်ဂါ ထောင်ဒဏ်အနှစ် ၂၀ ပေးခံရဓာတ်ပုံသတင်းနိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈ နေဘုန်းလတ်၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာ http://nayphonelatt.blogspot.com/ တွင် ဖော်ပြထားသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်။ (ဓာတ်ပုံ – နေဘုန်းလတ်)မြန်မာအာဏာပိုင်တို့က ဘလော်ဂါနေဘုန်းလတ်ကို ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ နှင့် ၆ လ ချမှတ်လိုက်သည်။ယနေ့အမိန့်ချမှတ်ရာ တရားခွင်သို့ နေဘုန်းလတ်၏မိခင် ဒေါ်အေးသန်း သွားရောက်ခွင့် မရခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်း၏ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းသည်လည်း ထောင်ဒဏ် ၄ လချမှတ်ခံလိုက်ရကြောင်း အေပီသတင်းဌာန ရေးသားထားသည်။ “အတော့်ကို မတရားတာပဲ” ဟူသော ဒေါ်အေးသန်း၏ မှတ်ချက်ကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အာဏာပိုင်တို့က ၎င်းတို့နှင့် အယူအဆ မတူသူအချို့ကို အောက်ပါအတိုင်း ထောင်ဒဏ်အသီးသီးပေးခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာ ၁၀နေဘုန်းလတ် – ၂၀ နှစ်၊...
> အနှစ် နှစ်ဆယ်ပန်ဒိုရာနိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ဒါဟာ ကလီရှေးဖြစ်နေတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဟိုနားဒီနား လျှောက်သွားနေတဲ့ ဝေါဟာရဒါပေမယ့် ရွေးချယ်စရာက မရှိတော့ဘူးရှေ့မှာ အနှစ်နှစ်ဆယ်စာကြီးက ပက်လက်မျောနေတယ်နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့လည်း မျောခဲ့တာ အနှစ်နှစ်ဆယ်ပဲခေါင်းငုံ့နေလိုက်မလား ကြာသွားမယ်အနှစ်နှစ်ဆယ်ဒါဆိုခေါင်းမော့ကြည့်ရဲသလား တွေ့သွားမယ်အနှစ်နှစ်ဆယ်အနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံး အိပ်မက်ကတစ်မျိုးထဲရယ်အနှစ်နှစ်ဆယ်ထောင်ချောက်ထဲမှာ အနှစ်နှစ်ဆယ်တေးတွေပဲ တီးကြဆိုကြဒီလိုဆို နောင်အနှစ်နှစ်ဆယ်ကြာဘ၀တွေထဲကလည်းအသက်နှစ်ဆယ် ထည့်ထည့်နုတ်နေကြရဦးမယ်အနှစ်နှစ်ဆယ်ကိုရင်းပြီး အနှစ်နှစ်ဆယ်ကို ဖဲ့ထုတ်ဖို့ တဲ့သို့ဖြစ်လေရာ ခင်ဗျားတို့နဲ့ ကျုပ်တို့ စကားတစ်ခွန်းလောက် ပြောလိုက်တိုင်းမှာအနှစ်နှစ်ဆယ်စာ တန်နေတာ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါနဲ့ …။ No tags for this post. Related posts No related posts.
> ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အကြပ်အတည်း မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း ထိခိုက် မိုးမခ အထောက်တော်(ရန်ကုန်) နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ရန်ကုန်မြို့လယ်မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ-မိုးမခ) စက်တင်ဘာလဆန်းတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ ငွေကြေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဈေးကွက်ဖြစ်သည့် ဝေါလ်စထရိ မှ စတင်လိုက်သည့် ကမ္ဘာ့လုံးဆိုင်ရာ အကြပ်အတည်းသည် မြန်မာပြည် စီးပွားရေးကိုလည်း ရိုက်ခတ်လာကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက ပြောဆိုသည်။ ယခုလောလောဆယ် တွေ့မြင်ရသည့် လက္ခဏာများမှာ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွင် ပဲ၊ ရေထွက်ပစ္စည်း၊ ရော်ဘာ စသည့် ကုန်ပစ္စည်း ၀ယ်ယူမှုနှင့် ဈေးနှုန်းကျဆင်းခြင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် အလုပ် သွားရောက် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အလုပ်အကိုင် ၀င်ငွေ ထိခိုက်ခြင်း၊ ပြည်တွင်း အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် ဆုတ်ဆိုင်းသွားပြီး အရောင်းအ၀ယ် အေးသွားခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။...
> နှစ်ပေါင်း ၅ဝ ကြာသောအခါလေထီးဦးအုန်းမောင်နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈ သီဟိုဠ်(သီရိလင်္ကာ)မှ အပြန်ခရီးသီဟိုဠ် (သီရိလင်္ကာ) ရှိ စစ်အဆောက်အအုံ အမှတ်၂၅ (ME 25) စစ်ကျောင်းတွင် သင်ယူ နေသော စစ်သင်တန်းသည် မတ်လ ၈ ရက် (၁၉၄၅ ခု) နေ့တွင် ပြီးဆုံးသွားသည်။ ကျွန်တော်တို့သင်ရသည့် သင်တန်းကာလမှာ ၁၉၄၅ ခု ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၈ ရက်နေ့အထိ ၁ လနှင့် ၂၅ ရက် ကြာသည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သဖြင့် သင်တန်းဆင်းနှုတ်ဆက်ပွဲကို မတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ဟောင်ရာနားစခန်း၌ ကျင်းပသည်။ သင်တန်းဆင်းပွဲသို့ ကျောင်းအုပ်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး မာတ်(စ်)ဂရေ့ဗ် (Col Musgrave) နှင့်...
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၅၂)အဆိုတော်ဝင်းဖေမာမာအေးနိုဝင်ဘာ ၉၊ ၂၀၀၈ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်- မာအေးချစ်တဲ့ သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့ အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ၊ ရှေ့သုံးပတ်လောက်ကစပြီးတော့ မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုတခုအပါအ၀င် ရုပ်သေးစင်ပေါ်က လွတ်လပ်ရေး မျှော်တွေး တေးသီချင်းတွေ ရေးကြ ဆိုကြတယ်၊ ဘယ်လိုအနုပညာမြောက်တယ်၊ ဂုဏ်မငယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို အဟောင်းကိုသစ်ပေးကြဖို့ရာ ပြောခဲ့တာပါရှင်။တကယ်လို့သာ မြန်မာပညာရပ်များနှီးနှောပွဲ ဆိုတာကို မရောက်ဘူးဆိုရင် ပြောဖြစ်မှာ မဟုတ်ဖူးရှင့်။ မာအေးလည်း ကိုယ်စွဲမက်ခဲ့တဲ့ အရုပ်ကလေးတွေကို မေ့နေတယ် လို့ ၀န်ခံရဦးမှာပါ။ ပုတီးနဲ့နေတဲ့ အရွယ် ရောက်နေပြီကိုးလေ။ အရုပ်ကလေးတွေကို မေ့နေပေမယ့် “မကတဲ့အရုပ် ကြိုးရှုပ်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားတော့ မကြာခဏ ပြောမိပါတယ်။...
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 22 No tags for this post. Related posts No related posts.
> ဗန်းမော်တင်အောင်နှင့် သူ၏စာပေတာဝန်ထက်မြက်နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၀၈ အနှစ် ၃၀ ဆိုသည်မှာ မျိုးဆက်တဆက်၏ သက်တမ်းဟု ယေဘုယျ သတ်မှတ်ထားသဖြင့် လွန်ခဲ့သော ၁၉၇၈ ခုနှစ်သည် မျိုးဆက်တဆက် ခြားခဲ့ပြီဟု ပြောရပေလိမ့်မည်။ ထိုသို့ သတ်မှတ်လျှင် ဆရာဗန်းမော်တင်အောင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည့် လွန်ခဲ့သော အနှစ် ၃၀ မှ ယနေ့ကာလအတွင်း မျိုးဆက်တဆက် ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပြီဟု ဆိုရပေလိမ့်မည်။ မျိုးဆက်နှင့် မျိုးဆက်တာဝန်ကို ပြောဆို ရေးသားခဲ့ရာတွင် အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံရှိသည်။ ဆရာဗန်းမော်တင်အောင် မကွယ်လွန်မီ ရက်ပိုင်းအတွင်း လွန်ခဲ့သော အနှစ်၃၀က မှာကြားသွားခဲ့သည်မှာ အလွန်မှတ်သားဖို့ကောင်းသည်။ သမိုင်းတွင်ကျန်ရစ်သော စကားလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာက “ရာစုနှစ်တခုမှာ မျိုးဆက်လေးခုရှိတယ်။ ၁၈၈၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ကိုလိုနီခေတ်ကစပြီး ဒို့အဘိုးတွေဟာ နယ်ချဲ့ကို တော်လှန်ခဲ့ကြတယ်။...
> ဗန်းမော်တင်အောင်အောင်ဝေးနိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၀၈ ညမှာထွန်းတဲ့မော်ကွန်းတစောင် – –အမှောင်ခွင်း၍ အလင်းဆောင်။ ပင်လယ်ရိုင်းမုန်တိုင်းထဲမယိုင်လဲတဲ့ကျောက်ဆောင်။ နရသိန်စစ်စစ်ညများကုန်လွန်သွားသော်တနေ့သော် – – ။ “ဗန်းမော်တင်အောင်”အလင်းရောင်သည်တောင်ထိပ်ပေါ်မှာ ထွန်းလိမ့်မည်။ ။ (မူရင်း – ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်း၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၇) No tags for this post. Related posts No related posts.
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၁၃)ပြည်သူ့စာဆို ဗန်းမော်တင်အောင်ထိန်လင်းနိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၀၈ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အချိန်ကနေ ဒီကနေ့အထိ စာပေလွတ်လပ်ခွင့် အရှိဆုံးခေတ်ကို ပြောပါဆိုရင် ဖဆပလ အစိုးရ အုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်ကိုပဲ ပြောရမှာပါ။ အဲဒီလို လွတ်လပ်တဲ့ခေတ်မှာ စာပေရေးသားမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပထမဆုံး အဖမ်းခံရတဲ့ စာရေးဆရာကို ပြပါဆိုရင်တော့ ဆရာ ဗန်းမော်တင်အောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာဆရာအဖြစ် ကွယ်လွန်ချိန်အထိ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ဆရာဗန်းမော်တင်အောင်ဟာ စာပေသက် နှစ်ပေါင်း ၄ဝ အတွင်း အကျဉ်းထောင်နဲ့ ကျွန်းမှာ ၁၃ နှစ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူရေးသားခဲ့တဲ့ စာပေတွေဟာ ခေတ်ကို ထင်ဟပ်စေသလို သူ့အမြင်ကိုလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးသားဝံ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျဉ်းကျနေစဉ်မှာတောင် စာပေရေးသားခွင့်ရှိတဲ့ ခေတ်မို့လို့...
> ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခန်း(၁၅)အောင်ဝေးနိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၀၈ ‘ထီးသုဉ်း နန်းသုဉ်း၊ မြို့သုဉ်းသုည၊ သုဉ်းသုံးဝဖြင့်၊ သုဉ်းရပြန်လစ်၊ သုညခေတ်ဝယ်၊ ဖြစ်လာရလေ၊ တို့တတွေသည်၊ သေသော်မှတည့် သြော် ကောင်း၏။’ ကိုလိုနီခေတ်ဦးတုန်းက ဆီးဘန်နီဆရာတော်ကြီး ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာပါ။ ကျနော်တို့ ဧရာဝတီခရီးစဉ်သင်္ဘော မြောင်းမြကို ၀င်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ကျနော် ဟံသာဝတီခေတ်က မြောင်းမြ သူရဲကောင်း ဗျည်းနွဲ့ရဲ့ စကားတွေကို ပြန်ကြားယောင်နေမိပါတယ်။ ဗျည်းနွဲ့ဆိုတာ မွန်ဘုရင် ဗညားနွဲ့လို့လည်း ခေါ်တဲ့ ရာဇဓိရာဇ်နဲ့ ဆင်စီးချင်းထိုးခဲ့တဲ့သူပါ။ အဲဒီပွဲမှာ ဗျည်းနွဲ့ ရှုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရာဇဓိရာဇ်က သူ့ကိုမသတ်ဘဲ သူကောင်းပြုဖို့ ကမ်းလှမ်းတဲ့အခါ ဗျည်းနွဲ့က ဒါကို လက်မခံပါဘူး။ ‘လူဆိုတာ ဘ၀မှာ တခါပဲ သေရတယ်၊ ရန်သူရဲ့ လက်ထဲမှာ...
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 21 No tags for this post. Related posts No related posts.
> အတွေးအမြင်စာစောင် မိုးကုတ်္ဘမို့မှစာပေဆုရရှိမိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၂နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၀၈ ရန်ကုန်အခြေစိုက် အတွေးအမြင်စာစောင်သည် မိုးကုတ်မြို့၊ သဟာယစာကြည့်တိုက်၏ နှစ်ပတ်လည်ဆု (၂၀၀၉)ကို ရရှိသွားသည်။ သဟာယစာပေဆုကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ စတင် ရွေးချယ် ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါဆုကို ၂၀၀၇ အတွက် စာရေးဆရာ ညီပုလေး၏ ငြိမ်သက်တစ်မိနစ်နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ စာအုပ်၊ ၂၀၀၈ အတွက် The Waves မဂ္ဂဇင်းတို့ ရရှိခဲ့သည်။ အတွေးအမြင်စာစောင်တွင် အတွေးအခေါ်၊ အတွေ့အကြုံ ဆောင်းပါးများ ပါဝင်ပြီး၊ ၁၉၈၄ အောက်တိုဘာတွင် စတင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ (ကိုးကား- မိုးကုတ်မီဒီယာ၊ http://mogokmedia.blogspot.com/) No tags for this post. Related posts No related...
> ရှေ့နေတွေကို ချေမှုန်းပြီဓာတ်ပုံသတင်းနိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၀၈ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ရှိန် (တိုက်ပုံအင်္ကျီအညိုဖြင့် ထိုင်နေသူ) ရှေ့နေ ဦးမြတ်သောင်း၊ ဦးအောင်သိန်း၊ ဦးကြည်ဝင်း စစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအတွက် အကျိုးဆောင်လျက်ရှိသော ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်း၊ ဦးခင်မောင်ရှိန် တို့ကို မျက်ကွယ်ထောင်ဒဏ် ၄ လ ချမှတ်လိုက်သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးမှာ အထိန်းသိမ်းခံနေရသည့် ဇာဂနာကဲ့သို့ ထင်ရှားသူများ၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ ရဟန်းသံဃာများဘက်မှ အကျိုးဆောင်နေသည့် ရှေ့နေများဖြစ်သည်။ဦးအောင်သိန်းက လာရောက်ဖမ်းဆီးမည်ကို စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်း၊ အကျဉ်းသားဝတ်စုံပြာ၊ သုံးစွဲနေရသည့် သွေးကျဆေး တို့ကိုလည်း အသင့်ပြင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း အေပီသတင်းဌာနသို့ ပြောကြားလိုက်သည်။ဦးအောင်သိန်း၏ဇနီးသည် ဒေါ်မိမိ (Mi Mi)က “ဦးအောင်သိန်း အကျိုးဆောင်ပေးနေတဲ့ အကျဉ်းသားတွေအတွက် ပိုပြီး စိုးရိမ်မိတယ်၊ သူတို့အမှုတွေ ရှေ့နေမရှိဘဲ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲမသိဘူး” ဟု...
> အမျိုးသားအောင်ပွဲ မော်ကွန်းထိန်လင်းနိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၀၈ ‘ယူနီဗာစီတီ အက်’ တဲ့တက္ကသိုလ်က ပြဋ္ဌာန်းချမ်းသာ ဆင်းရဲ ခွဲတဲ့သဘောတင်းကျပ်တဲ့သဘောကန့်သတ်တဲ့သဘောအဲဒီလို သဘောတွေကြောင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေ အုံကြွပထမ သပိတ် စခဲ့သည်။ အဲဒီ သပိတ်နဲ့အတူပြည်သူတွေ နိုးကြား‘အမျိုးသားကျောင်း’ ဆိုတာလည်း ထွက်ပေါ်‘ကိုယ်တော်မှိုင်း’အစ ‘ဦးဘချို’အလယ်လူငယ်များ အဆုံးအားလုံးညီ လက်ခိုင်တွဲဇာတိမာန် အံတုပွဲကိုနွှဲခဲ့ကြသည်။ ၁၉၂ဝ၁၉၃၆ချောက် ရေနံမြေသပိတ်ကျောင်းသားသပိတ်နဲ့ လယ်သမားသပိတ်အင်္ဂလိပ်ကို ဖီဆန်သမိုင်းဝင် တော်လှန်ရေးများတိုင်းရင်းသားတွေ စုံညီမြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးတေးသစ်ခဲ့သည်။ အောင်ပွဲဆင်တဲ့ သပိတ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ စိတ်အတိတ်ကို လက်ဆင့်ကမ်းလွတ်လမ်းကို ဆက်ရှာဖွေမြန်မာပြေရဲ့ ပစ္စက္ခဒုတိယ လွတ်မြောက်ရေးအတွက်သွေးချွေးတွေ ပေးနေဆဲမို့မလွဲပေါင် မကြာခင်တို့ပြည်ခွင် လွတ်ရစေ့မယ်မွေးနေ့ မော်ကွန်း။ ။ ၂ဝဝ၈ နိုဝင်ဘာ ၇ (နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် ၈၈ နှစ်မြောက် အမျိုးသားအောင်ပွဲ မွေးနေ့...
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 20 No tags for this post. Related posts No related posts.
> မြွေအုန်းမြင့်နိုဝင်ဘာ ၆၊ ၂၀၀၈ အဲဒီမြွေဟာငါ့ကိုဟိရိသြတ္တပ္ပမျက်လုံးတပ်ဆင်ပေးခဲ့တယ်အဲဒီမြွေဟာငါ့ကိုခါးစည်းဝတ်ပေးခဲ့တယ်ကောက်ပဲသီးနှံ ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့တယ်ငါ့မယားကိုသမိုင်းမျိုး ကြဲပက်စေခဲ့တယ်ဂျိမ်းစတက်ဖန်ကတဆင့်“တူရွင်းတလက်ဓားတချောင်းနဲ့ဦးနှောက်တခု” ** ပေးပို့ခဲ့တယ်ငါ့ကိုတိရိစ္ဆာနဗေဒနဲ့ အာကာသသျှတ္တရကျမ်းဆူလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်အဲဒီမြွေဟာတနေ့သောအခါတိရိစ္ဆာန်တကောင်ဖြစ်လာပြီး ကမ္ဘာကိုပိုင်စိုးဖို့ငါ့လည်ချောင်းထဲအဆိပ်အိမ် တည်ဆောက်ပေးခဲ့တယ်။ ။ ** A sword,aspade andathought should never be allowed to rust. (James Stephen) No tags for this post. Related posts No related posts.
>Remembering U Htain Linn ( Bo Ta Thaung) –4Years
> ဦးထိန်လင်း(ဗိုလ်တထောင်) ကွယ်လွန်ခြင်း ၄ နှစ် ဆွမ်းကျွေး နိုဝင်ဘာ ၄ က ပြုလုပ်၊ မိတ်ဆွေ စာနယ်ဇင်းသမားများ တက်ရောက်ကြ မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း နိုဝင်ဘာ ၆၊ ၂၀၀၈ မျက်စိ ခွဲစိတ်ထားသော ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်အပါအ၀င် ခေတ်ပြိုင်နှင့် မျိုးဆက်သစ် နိုင်ငံရေး၊ စာပေနှင့် စာနယ်ဇင်း မိတ်ဆွေများ၊ မိသားစုများ တက်ရောက်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ စစ်အုပ်စုကို အညံ့မခံဘဲ ကွယ်လွန်သည်အထိ တရားမျှတမှုနှင့် အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်သူ သတင်းစာသမားကြီးအဖြစ် လူအများက လေးစားချစ်ခင်သူဖြစ်သည်။ သူပြောခဲ့သည့် စကားတခုကို ကိုးကားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ “ခုလို နိုင်ငံရေးစကားတွေပြောနေတာဟာ … မျက်စိကန်း တစ္ဆေမကြောက် ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး။ မျက်စိလည်းကောင်းတယ်၊ တစ္ဆေက ဘယ်လောက် ကြောက်စရာကောင်းတယ်...
>World hails Obama’s victory
> အိုဘားမားသတင်း နိုင်ငံတကာက ၀မ်းမြောက်စွာကြိုဆိုဥတ္တရမွန်းနိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပထမဆုံးသော လူမည်းသမ္မတ ဘာရက်အိုဘားမားကို ရွေးချယ်တင်မြောက်လိုက်ခြင်းသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ အမေရိကန်နိုင်ငံအပေါ် ချစ်ခင်မှုကို အသစ် ပြန်လည် မွေးဖွားစေလိုက်ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲနေ့၌ အာဖရိကနိုင်ငံများ၏ ပြည်သူများသည် တညလုံးမအိပ်၊ အချို့လည်း အရုဏ်တက်မတိုင်မီကတည်းက အိပ်ရာမှထပြီး အမေရိကန်၏ သမိုင်းတွင်သွားမည့် သတင်းကို စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြသည်။ အိုဘားမား၏ ဖခင်မွေးဖွားရာ ကင်ညာနိုင်ငံတွင်လည်း အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်အဖြစ် ကင်ညာသမ္မတက ကြေညာလိုက်သည်။ အိုဘားမား ကလေးဘ၀က တက်ရောက်ခဲ့သော အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ မူလတန်းကျောင်းတစ်ခုမှ ရာပေါင်းများစွာသော ကျောင်းသားများသည်လည်း အိုဘားမားအနိုင်ရကြောင်း သတင်း ကြားကြားချင်း ကစားကွင်းထဲသို့ ပျော်ရွှင်စွာပြေးထွက်ပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပွေ့ဖက်ကာ “အိုဘားမား .. အိုဘားမား . . ”...
>Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 19
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 19 No tags for this post. Related posts No related posts.
>5th Nov 2008 – MoeMaKa Wednesday Weekly
> ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၅ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ် လေဘေးသင့်ဒေသအတွက် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်၏ စီမံချက်သစ်၊ သီချင်း ၅၆ ပုဒ် ပါဝင်မည့် ရန်ပုံငွေ ဒီဗီဒီ၊ မာမာအေး ဖောင်ဒေးရှင်း ရန်ပုံငွေပွဲ၊ တောင်ကြီး မီးပုံးပျံပွဲတော် စသည့် မျက်မှောက်ရေးရာ သတင်းများ မောင်သွေးသစ် ၏ ကဗျာ – ကာလပေါ် ဆေးမြီးတို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိန့်ခွန်း – စစ်တပ်အနေဖြင့် ကြားနေမှု ရှိမရှိအကြောင်း လူထုဒေါ်အမာ ၏ဆောင်းပါး – ကိုဗဟိန်းသို့ စကားကြွေး No tags for this post. Related posts No related posts.
> တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်စိုးသင့်ဆွေနိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ မဲပေးတယ်ဆိုတာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတယောက်အတွက်တော့ နိုင်ငံသားတာဝန်တရပ်ကို ထမ်းဆောင်တာပါတဲ့။ အရင်က အမေရိကန်နိုင်ငံသား လူငယ်လူရွယ်တွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲတို့ မဲပေးတာတို့ကို စိတ်ဝင်စားမှု နည်းပါးကြပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးသူရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများဟာလည်း လူလတ်ပိုင်း နဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို ပင်စင်စားတွေပဲ များတာပါ။ ဒီနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ လူငယ်တွေနဲ့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေက ပိုပြီး တက်တက်ကြွကြွ မဲပေးခဲ့ ထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ တခဲနက်ထောက်ခံအားပေးခဲ့သူကတော့ လူငယ်သမတလောင်း (ခုတော့ အမေရိကန်ရဲ့ ပထမဆုံး လူမည်း သမ္မတ) Barack Obama ကို ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတွေဟာ စီးပွားရေးကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ ဘဏ္ဍရေးလိုငွေပြမှု နဲ့ စစ်ပွဲတွေ...
>“tar b,fawmhrS rao ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ မြန်မာစာပေဟောပြောပွဲတွင် မြန်မာလူငယ်များက နံရံကပ်စာစောင်တင်ဆက်မည် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ နိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ လာမည့် နိုဝင်ဘာ ၈၊ စနေနေ့တွင် ဆန်ဖရန် ဘေးဧရိယာ ၉ ကြိမ်မြောက် စာပေဟောပြောပွဲကို မြန်မာမိသားစုများက ၀ိုင်းဝန်းကျင်းပကြမည် ဖြစ်သည်။ ၀ိုင်းဝန်း ကမကထပြုကြသည့် စုပေါင်းအလှူရှင်များ၊ စေတနာရှင်များကြောင့် ဧည့်သည်စာရေးဆရာ ၄ ဦး (ဒါရိုက်တာ ၀င်းဖေ၊ မောင်စွမ်းရည်၊ ဒေါ်မာမာအေး၊ အောင်ဝေး) နှင့် အိမ်ခံ စာရေးဆရာ ၁ ဦး (ဉာဏ်ဦးမောင်) တို့နှင့် စည်စည်ကားကား ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဘေးဧရိယာရှိ မြန်မာလူငယ်များ စုပေါင်းသည့် နံရံကပ်စာစောင်ပြပွဲ တခုကို ရွှေပွဲလာပရိသတ်များအတွက်...
Page 849 of 903«1...847848849850851...903»
>massage parlors in rangoon